Lix xisbi siyaasadeed oo la guddoonsiiyay shahaadooyin KMG ah – Radio Muqdisho
Lix xisbi siyaasadeed oo la guddoonsiiyay shahaadooyin KMG ah
Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka
Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa maanta shahaadooyinka KMG ah gudoonsiiyay ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo cusub, kuwaasi oo qeyb ka noqon doona axsaabta siyaasadeed ee dalka, kaddib markii ay buuxiyeen sharuudihii laga rabay.
Xisbiyada KMG ah ee shahaadooyinka la siiyay maanta ayaa kala ah.
2-Xisbiga Hor-usocodka shaqaalaha,
3-Xisbiga Dhaq dhaqaaqa,
Tirada guud ee xisbiyada siyaasadeed ee sida KMG ah uga diiwaan gashan gudiga doorashooyinka Qaranka ayaa hadda ah 63 xisbi, kuwaasi oo gebi ahaanba buuxiyay sharciyaddii ay ku noqon lahaayeen xisbi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku howlan sidii guud ahaan dalka looga hirgelin lahaa hanaanka xisbiyada badan, si looga gudbo hannaankii hore ee wax lagu dooran jiray.
Shirka horumarinta Maaliyadda dalka oo lagu soo gabo gabeynayo Uganda
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la leh qaar kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee KMG ah ee dalka